Amasonto 21 okukhulelwa. indlela Isigamu ngemuva
Kuziwa Emasontweni onke okukhulelwa 21, bese ingxenye indlela sivele sidlulile. Lokhu kungenziwa ngokuthi uhlobo amazwe. Baningi injabulo losalela emuva. Umama ayeyintanga yakhe asekhuluma ejwayele isimo sakhe esikhethekile kokubili emzimbeni nasengqondweni. Engxenyeni yesibili sikhululeke kakhudlwana, abaningi ngalesi sikhathi zinyamalale ngokuphelele zonke izenzo ubuthi, ezolile futhi ngokuya usongo ukukhipha izisu, ukwesaba eyinhloko kokuba losalela emuva.
Yini azizwa-fetus ngesikhathi sokukhulelwa amasonto 21 '? Inesisindo mayelana 350 amagremu, ubude mayelana 28 amasentimitha. Isikhumba usenayo luhlaza abomvana, kodwa ayisekho kucace kangaka. Umbala obala ziyashintsha ngenxa ukuhlehliswa ka kokuqala amanoni ongama. Usuku ngalunye oludlulayo kuba fat xaxa futhi ingane kancane kancane ilahlekelwa nemibimbi yayo yangaphambili. Isikhumba ihlanganisa engasindi fluff lanugo, kwezinye izindawo lapho syrovidnaya amafutha. Ebusweni kancane kwakhiwa amashiya kanye eyelashes. kancane kancane Iba ezingcono izitho zangaphakathi ukwakha imisipha.
Umntwana uqala i-amniotic fluid, okuyinto kugaywe amathumbu kakade seyisebenza ngokugcwele. Kusukela emathunjini undigested ezisalayo kwakhiwa meconium noma cal ehlukile yasekuqaleni. Kuhlanganisa izinwele ingane vellus, ishq we epidermis, sebum futhi ogqamile, luhlaza cishe abamnyama.
Kuleli izithelo eside ithola imisindo ehlukene, afinyelele ke njengoba oscillations nokudludliza. Umama kungase kuqashelwe ukuthi uma konke kusenjalo uzwe umsindo abukhali futhi elikhulu, izinyane bathuka futhi uqale ngenkuthalo ukuhambisa.
Ngokuvamile lokhu kwelashwa udokotela ultrasound eside iqondiswa. Emasontweni onke okukhulelwa 21 kuyinto ngempela ezithakazelisayo, njengoba unina sibona umntwana iphuza amniotic fluid, ngenkuthalo ihamba ezingalweni kanye nasemilenzeni. Phakathi nale nkathi, kakade ngaphandle kwezinkinga, ungabona ubulili yengane, yebo, uma efuna futhi akusho ukufihla indawo ezithakazelisayo nemilenze zihlangene.
Njengoba Emasontweni onke okukhulelwa 21 engekho kuleli, kungenzeka ngamafuphi kabusha umzimba zesifazane.
Umthwalo esimiso senhliziyo nemithambo yegazi ngempela high ngenxa ukubukeka emzimbeni kwegazi ezengeziwe. Inani igazi ivolumu kukhuphuke ngo namamililitha 500, i-pulse kuba njalo, cishe 90 amabhithi ngeminithi. Ingcindezi enkulu kunemicebo ezingeni yangaphambilini ye-10 milmetrov HG.
Uma uqhathanisa ukwenza kwe-ukuhlolwa kwegazi ukufundwa sokukhulelwa ekuseni , futhi manje, uma kakade Emasontweni onke okukhulelwa 21, zingabantu ngokuphongoza. White cell segazi siba sikhulu, yashesha erythrocyte sedimentation izinga, bese ukhulisa zomthamo. Kulesi nkathi anaemia wandile ngesikhathi sokukhulelwa, ngakho odokotela njalo wabelwe ukuhlolwa igazi for oyisazi samakhemikhali ezinto eziphilayo. yensimbi encishisiwe kuyingozi uma abesifazane untula kuyabekwa Izithako yensimbi kanye uhlobo olukhethekile lokudla kuhlanganise kwesibindi, utamatisi juice, ama-aphula, nokunye okufana nokolweni.
Ungaphuthelwa, futhi yokubuyiswa umchamo. Kwesibeletho ezikhulayo licindezele umlomo ureter futhi isinye, kwaphazamiseka ukugeleza umchamo. Ngakho-ke, ungakwazi ukwakha pyelonephritis lalivamile abakhulelwe. Lokhu kungenxa yokujama tsi umchamo kanye nalemvelaphi izifo. Lokhu kungase pryavitsya ukuchama ubuhlungu, ubuhlungu emuva, ubuthakathaka jikelele. Into esemqoka - isikhathi ukuvimbela ukuqhubeka kwesifo, kahle excretory umsebenzi kanye ukulimaza ingane. Supply kwezakhi liwohloka, futhi ngisho ukulimaza ubuthi akasuswanga kusukela egazini. Uma kukhona nezici ezithile ukuze pyelonephritis, kutuswa nokuvimbela ngezikhathi uvuke lakho konke okuhamba ngezine, ngaleyo ndlela ingqondo okugcono ukugeleza umchamo.
Uma amasonto 21 abakhulelwe noma ngaphezulu, kumane nje akwamukeleki ukweqa amasheke.
Tablets kusuka ukukhulelwa okungafunwa - lokho ukukhetha
Indlela okukhulelwa umfana: izeluleko kongoti
Izici ukukhulelwa yesibili nokubeletha. lokuzalwa Okwesibili nzima noma kube lula?
Imbewu sokukhulelwa. imbewu Ithanga ekukhulelweni
Poses ngoba abakhulelwe
Milan Baros - Czech inkanyezi kuhlasela
Wamabele emva kokuzalwa: izincomo esiyinhloko ukunakekelwa
Amasaladi umntwana - kuyasiza futhi esihlwabusayo!
Butterfly Ebukekayo obondeni. I Singularity we element zokuhlobisa
Impi, Turkey: ohlwini, incazelo, umlando kanye nemiphumela. Impi yombango emlandweni eTurkey, amaqiniso athakazelisayo kanye nemiphumela
Coffee spoon futhi isipuni - yini umehluko? Kanjani ikhofi spoon futhi bangaki amagremu ke?
Wire crimping usebenzisa liner
Amanga-ugongolo ngezandla zakhe
Racks izingubo, phansi: incazelo, zinhlobo inzuzo. Ingabe ngenza isiphanyeko-yokubeka ngezandla zakho?
Granada, Alhambra ibe yinhle kangaka - umklamo kanye epaki eziyinkimbinkimbi: incazelo. ezikhangayo Spain
I-Chalcedony ngamatshe: izindawo nezinkolelo